Kooxda Barcelona oo bisha Janaayo doonaysa inay amaah ku qaadato mid ka mid ah xiddigaha sare ee Arsenal – Gool FM
(Barcelona) 30 Sebt 2019. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa la soo warinayaa inay doonayso inay xaqiijiso inay amaah ku soo qaadato xiddiga naadiga Arsenal ee Mesut Ozil suuqa kala iibsiga bisha Janaayo.
Ozil ayaan u muuqan mid la haysta ka hoos ciyaaridda macallinka cusub ee Arsenal Unai Emery, iyadoo xiddigan reer Jarmal aan loo arkin mid qeyb ka ah qorshaha garoonka Emirates, kubbad sameeyahan ayaana ka soo muuqday 24 kulan oo horyaalka Premier League ah xilli ciyaareedkii hore.
Kooxda Barcelona ayaa kor u qaadday hal abuurkooda xagaagii, iyagoo keensaday Frenkie de Jong oo ka yimid kooxda Ajax iyo Antoine Griezmann oo ay ka soo qaateen Atletico Madrid, halka sidoo kale ay soo dalacsiiyeen da’yarka Ansu Fati.
Si kastaba ha haatee, sida ay sheegayaan wararka laga helayo dalka Spain, Barcelona ayaa diyaar u ah inay amaah ku qaadato Ozil bisha Janaayo marka uu furmo suuqa kala iibsiga xiddigaha, iyagoo fursad u siinaya inay wada iibsadaan 30-sano jirkaan dhammaadka xilli ciyaareedka.
Ozil, kaasoo saddex xilli ciyaareed ku soo qaatay Real Madrid ayaa la sheegayaa inuu diyaar u yahay inuu ku biiro kooxda reer Catalonia bisha Janaayo.
Xiddigan Jarmalka ah ayaa noqon kara bedelka dhakhsaha leh ee Ousmane Dembele, iyadoo tababare Ernesto Valverde lagu soo waramayo inuu diyaar u yahay inuu iska iibiyo xiddiga reer France ee Dembele kaddib markii ay ka sii careysiiyeen habdhaqankiisa, iyadoo aan xusuusta laga saarin karin dhaawacyada ku soo noq-noqday.